iDVD ma gubi karaa MOV? Hel xalkii Halkan.
Marka dadku ay isku dayaan in ay dajiyaan files MOV si ay u iDVD u gubanaya DVD cusub, mar walba waxaa jira nooc kasta oo dhibaato. Tusaale ahaan, dadka qaarkood iDVD mar dambe ma shaqeyn karaan, dadka qaar ka mid ah ka heli sawir wax soo saarka ee DVD waa mid aad u xun, iyo wixii la mid ah. Haddii aad sidoo kale dhibaato ku MOV gubanaya si iDVD, waxaan si adag kugula talinaynaa in aad isku daydo qalab kale si ay u gubaan files MOV aad. Wondershare DVD Creator for Mac (Wondershare DVD Creator ) waa DVD gubanaya qalab aad u awood badan oo la taaban karo. Waxay kaa caawin karaan inaad ka iMovie, QuickTime, fiidiyo iyo ka badan oo ilo kale gubi MOV. Tan ugu muhiimsan, wax soo saarka saamayn ku dhowaad waa isku mid sida video asalka.
iDVD la joojiyey by Apple. Sidaas, sababta aan u beddelayo this Mac DVD gubi weyn? MOV ka sokow, barnaamijka ayaa sidoo kale taageertaa qaabab kale video kala duwan sida MP4, wmv, MKV, AVI, FLV, VOB, 3GP, 3G2, MPEG, Mpg, MTS, M2TS, TOD, mod, iwm shaki kuma jiro, barnaamijka tani waxay noqon kartaa in aad kaliya DVD gubanaya qalab on Mac. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka faahfaahsan.
1 dejinta aad MOV video files barnaamijkan
Waxaad sidoo kale ku dhacay karaa "+" button dhinaca midig ee suuqa ama si toos ah jiidi jeedi video files barnaamijkan ee Murayaad bidix. Ka dibna waxaad arki doonaa oo dhan video files ku qoran software this, sida lagu muujiyey jaantuskan hoose.
By gujinaya ah "↑" ama "↓" ikhtiyaarka ugu sareysa, waxaad bedeli kartaa isku xigxigta, video ah. Waxaa loola jeedaa waxaad bedeli doonaa si loo maqli karo ee DVD.
Si aad u jiidi mid video file in kale, aad awoodaa inuu iyaga wada geeyo.
Haddii aad guji doorasho Edit ku saabsan mid ka mid ah baararka video item, waxaad noola, isku shaandheyn, jar videos, ku dar saamayn qabow iyo watermark iwm
Barnaamijkan weyn siinaysaa badan oo arrimo firfircoon iyo arrimo ma guurto ah. Just guji "Menu" ikhtiyaarka hoose ee interface ugu weyn, ka dibna ka dooro mid ka mid ah foom oo aad loo jecel yahay. Haddii aad doorato mid ka mid ah ma guurto, waxaad sii wadi kartaa in ay astaysto, waxaad tidhaahdaan, ku dar qoraalka, button, thumbnail, jir, music asalka iyo image iwm Haddii aad u malaynayso ma jiro arrimo ku filan oo uu ka soo xusho, waxaad riixi kartaa halkan si aad u hesho in ka badan Foomamka .
3 Dib mashruuca iyo gubi videos in DVDs
Markii wax walba la sameeyo, kaliya riix si aad ku eegaan mashruuca si loo hubiyo in saamaynta final. Haddii ay ok, waxaad kaliya gelin ah disc DVD5 / DVD9 maran, ka dibna riix badhanka rukun ee hoose-saxda ah ee suuqa kala inuu ku soo bilowdo DVD gubanaya. Saaxir hanuunin doonaa inaad ka shaqeeyaan inta ka dhiman dejinta. Aad bay u fududahay, soo maaha?
Fiiro gaar ah: Haddii tirada files daray waa ka weyn tahay wax lagu kaydin jiray oo aad awoodda kaydinta DVD disc, software this si toos ah u cadaadin doona faylasha, kuwaas oo ku haboon disc this DVD, taas oo ka dhigi doonaa khasaaraha tayada video xaddi waxoogaa ah.
Sida loo Beddelaan MKV in AVCHD u PS3 Blu-ray iyo
Top 5 MP4 Free MP3 in converters: 100% MP4 badalo Free in MP3
Sida loo dar, Edit QuickTime MOV metadata for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Sida loo soo biir YouTube Videos
Sida loo Laablaab YouTube (FLV) Videos
> Resource > Beddelaan > iDVD ma gubi karaa MOV? Hel xalkii Halkan